Vols kubva kuMoscow kuenda kuHurghada uye Sharm El Sheikh paAeroflot izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Vols kubva kuMoscow kuenda kuHurghada uye Sharm El Sheikh paAeroflot izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Egypt Kudzokorora Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Sekureva kwechirongwa chakaziviswa, Aeroflot ichaita nendege imwe kubva kuMoscow kuenda kuHurghada uye Sharm el-Sheikh mazuva ese, kutanga kubva Gumiguru 1, 2021.
Russian mureza anotakura anozivisa dzakarongwa nendege kuEgypt Red Sea resort maguta.
Aeroflot ichashanda Hurghada uye Sharm el-Sheikh nendege mazuva ese.
Ndege dzeAeroflot dzeHurghada uye Sharm el-Sheikh dzichashanda kubva kuMoscow.
Mureza weRussia anotakura mureza Aeroflot yazivisa nhasi yatanga kutengeswa kwematiketi kwendege dzakananga dzakatakurwa kubva kuMoscow, Russia kuenda kunzvimbo dzekuchengetera dzeGungwa Dzvuku dzeHurghada neSharm el-Sheikh.
Sekureva kwechirongwa chakaziviswa, Aeroflot ichashanda imwe ndege kubva kuMoscow kuenda Hurghada uye Sharm El-Sheikh zuva nezuva, kutanga kubva Gumiguru 1, 2021.
Kubva Nyamavhuvhu 27, Russia yakawedzera zvakapetwa katatu nhamba dzendege dzinowanzoenda kuEjipitori munzira dzeMoscow-Hurghada neMoscow-Sharm el-Sheikh - kubva pa5 kusvika gumi neshanu nendege pavhiki munzira yega yega zvichitevera danho remubatanidzwa wemakurukota ekurwira COVID15.
Sekureva kweFederal Air Transport Agency, ndege pfumbamwe, kusanganisira Aeroflot, vagamuchira mukana wekushandisa nendege munzira idzi, kuwedzera kuna Rossiya. Pakutanga, Aeroflot yaisashanda nguva dzose nendege kunzvimbo idzi.
PJSC Aeroflot - Russian Airlines, inowanzozivikanwa seAeroflot, ndiyo inotakura mureza uye ndege huru yeRussia. Iyo yendege yakavambwa muna 1923, ichigadzira Aeroflot imwe yendege dzendege dzinoshanda kwazvo pasi rose.
Aeroflot inotungamirwa neCentral Administrative Okrug (Dunhu), Moscow, ine hub yayo iri Sheremetyevo International Airport. Ndege inobhururuka ichienda kunzvimbo dzinokwana zana nemakumi matanhatu nenhanhatu munyika makumi mashanu nemaviri, kusanganisa masevhisi akagovaniswa.